အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအဘယ်သူနည်း
ဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ပြန်လာ၏အစောဆုံးထောက်ခံသူတွေကိုတစ်ခုမှာ, ခရစ်တော်အတွက်အားလုံးယုံကြည်သူများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိရန်တစ်နည်းလမ်းများအတိုင်း, မက်သဒစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတော်ဘုရားကျောင်း၏ဂျိမ်း O'Kelly ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1793 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအသင်းတော်များ၏ Baltimore ညီလာခံကနေနုတ်ထွက်နှင့်သာအယူဝါဒအဖြစ်ကမျြးစာကိုယူပြီးသူ့ကို join ဖို့အခြားသူများကိုပဌနာ။ မိမိအသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးအကျယ်အချို့ခုနစ်ထောင်ပါအချက်အလက်တွေစရိုက်ဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာဖို့ပြန်လာဆီသို့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းဘယ်မှာသမိုင်းမှတ်တမ်းများဗာဂျီးနီးယားနှင့်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားထဲမှာခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။
1802 ခုနှစ်တွင်နယူးအင်္ဂလန်အတွက်နှစ်ခြင်းတို့တွင်အအလားတူလှုပ်ရှားမှုကိုအာဗနာဂျုံးစ်နှင့်ဧလိယသည်စမစ်တို့ကဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့က "ဂိုဏ်းအမည်များနှင့်ဘာသာအယူဝါဒရှိသူမတူညီ" စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောလမ်းညွှန်အဖြစ်ကမျြးစာကိုယူ, သာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ခရစ်ယာန်ဝတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 1804 များတွင်ကင်တပ်ကီ၏အနောက်ဘက်နယ်စပ်ပြည်နယ်အတွက်, Barton ဒဗလျူကျောက်စာနှင့်အခြား Presbyterian တရားဟောဆရာသူတို့အဖြစ်ကမျြးစာကိုယူမယ်လို့ကြေညာအလားတူအရေးယူမှုယူ "ကောင်းကင်မှသာသေချာလမ်းညွှန်။ " သောမတ်စ်ကင်းဘဲလ်တို့နှင့်သူ၏ Illustrious သား, အလက်ဇန်းဒါးကမ့်ဘဲလ်, ယခုအနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကဘာလဲဆိုတာအတွက်တစ်နှစ် 1809 အလားတူခြေလှမ်းတွေကိုယူ။ သူတို့ကဘာမျှဓမ္မသစ်ကျမ်းအဖြစ်ဟောင်းမဖြစ်သောဩဝါဒကိုတစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ခရစ်ယာန်များသည်အပေါ်သို့ခညျြနှောငျခံရသင့်ကြောင်းဆန့်ကျင်ဘက်။ ဤတရားလေးပါးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့စအတွက်လုံးဝလွတ်လပ်သောကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့သည်မိမိတို့ဘုံရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသနားခံတဦးအားကြီးသောပွနျလညျထူထောငျလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤသူတို့သညျသစ်တစ်ခုအသင်းတော်ကိုစတင်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်တစ်ခုပြန်လာထောက်ခံခဲ့ပါဘူး။
သစ်တစ်ခုအသင်းတော် 19th ရာစုအစအဦးအနီးအပါးစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏အဖွဲ့ဝင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ပဋိသန္ဓေ ယူ. မရကြဘူး။ အစား, မြေတပြင်လုံးလှုပ်ရှားမှုရှိသောအသင်းတော်သည်မူလကပင်တေကုတ္တေ, အေဒီ 30 အပေါ်ထူထောင်ခေတ်ပြိုင်ကာလ၌မျိုးပွားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါအယူခံဝင်မှု၏အစွမ်းသတ္တိကိုခရစ်တော်ရဲ့မူရင်းဘုရားကျောင်း၏ပွနျလညျထူထောငျတည်ရှိသည်။
ဒါဟာအဓိကအားသမ်မာကမျြးအပေါ်မှာအခြေခံဘာသာရေးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးများအတွက်အသနားခံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကိုခှဲဝေဘာသာရေးကမ်ဘာပျေါတှငျကမျြးစာရာအပေါ်သို့အရှိဆုံးလျှင်အားလုံးမဟုတ်, ထိုပွညျ၏ဘုရားသခငျကိုကွောကျရှံ့သောလူစည်းလုံးနိုင်ပါတယ်၏တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သမျှဘုံပိုင်းခြေကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ဒါဟာနောက်ကျောကမျြးစာကိုသှားဖို့တစ်ခုအယူခံဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသမ်မာကမျြးပြောတတ်ဘယ်မှာပြောဆိုရန်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာဘာသာတရားကိုမှစပ်ဆိုင်သောအသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိစ္စရပ်များအတွက်အသံတိတ်သည်အဘယ်မှာရှိတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အသနားခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ထပ်ဘာသာရေးအရာအားလုံးကိုတစ်ဦးပြုသမျှတို့ကိုအဘို့ "အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်" အဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုအားလုံးယုံကြည်သူများ၏ဘာသာရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံဓမ္မသစ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောအားကိုးခန့်မှန်းချက်ခရစ်တော်၏ 15,000 တစ်ဦးချင်းအသင်းတော်များထက်ပိုပြီးစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ "ခရစ်ယာန်သံတော်ဆင့်," အသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုရည်မှတ်စာရင်းဇယားတင်ဆက်ထားတဲ့အထွေထွေဘာသာရေးထုတ်ဝေခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်ယခု 2,000,000 ကြောင်း။ ခန့်မှန်း လူသိရှင်ကြားတရားကိုဟောပြောသောသူအ 7000 ယောက်ျားထက် ပို. ရှိပါသည်။ အသင်းတော်ငါးဆယ်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျော်ရှစ်ဆယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်တည်ရှိနေသော်လည်းအသင်းတော်၏အသင်းဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းပြည်နယ်များအထူးသဖြင့် Tennessee ပြည်နယ်နှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတိုးချဲ့ဒုတိယကမ္ဘာ့ဖလားဥရောပ၌စစ်, အာရှနှင့်အာဖရိကကတည်းကအများဆုံးကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ထက်ပိုမို 450 အချိန်ပြည့်လုပ်သားများနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ထောက်ခံနေကြသည်။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များယခု 1936 ၏အမေရိကန်ဘာသာရေးသန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်အဖြစ်ငါးကြိမ်အဖြစ်အင်္ဂါအများရှိရှိသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတွေ့ရှိအဖှဲ့အစညျး၏အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါခရစ်တော်၏အသင်းတော်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဘုံကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယင်း၏သွန်သင်ချက်လိုက်နာမှုအတူတူသူတို့ကိုချည်နှောင်ထားတဲ့အကြီးဆက်ဆံမှုဖြစ်ကြသည်။ အသင်းတော်၏အဘယ်သူမျှမအလယ်ပိုင်းဌာနချုပ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဒေသခံအသင်းတော်များ၏အကွီးအကဲမြားမှသာလွန်မျှအဖွဲ့အစည်းကရှိပါသည်။ အသငျးတျောမြားမိဘမဲ့များနှင့်အသက်ကြီးထောက်ပံ့အတွက်အသစ်နယ်ပယ်များတွင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခွငျးတှငျနှင့်အခြားအလားတူအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်ဆန္ဒအလျောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ပါ။
ခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များအသက်ကြီးများအတွက်လေးဆယ်ကောလိပ်များနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများအဖြစ်ခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်မိဘမဲ့ဂေဟာများနှင့်နေအိမ်များလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ 40 မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အသင်းတော်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်များကထုတ်ဝေသည်အခြားစာနယ်ဇင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ "အမှန်တရား၏သံတော်ဆင့်" အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးကတစ်နိုင်ငံလုံးရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် Abilene တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းအဘိဓါန် Highland ရိပ်သာလမ်းဘုရားကျောင်းကကမကထပြုနေသည်။ $ 1,200,000 ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ဘတ်ဂျက်၏အများကြီးခရစ်တော်၏အခြားသောအသင်းတော်များကအခမဲ့-အလိုတော်အခြေခံပေါ်မှာလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုယခု 800 ဘူတာထက်ပိုမိုအပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသောနေစဉ်အဆိုပါရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလက်ရှိ 150 ရေဒီယိုစခန်းများထက်ပိုမိုအပေါ်ကြားရကြ၏။ "ကမ္ဘာ့ဖလားရေဒီယို" အဖြစ်လူသိများနောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်ရေဒီယိုအားထုတ်မှုတစ်ဦးတည်းဘရာဇီး 28 ဘူတာ၏ကွန်ယက်ကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်အရေအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေသည်နှင့် 14 ဘာသာစကားများထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဦးဆောင်အမျိုးသားရေးမဂ္ဂဇင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်ကြော်ငြာအစီအစဉ်အတွက်နိုဝင်ဘာလ 1955 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမစည်းဝေးကြီးများ, နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ, ဒါမှမဟုတ်အရာရှိတဦးကစာပမြေားရှိပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ပွနျလညျထူထောငျ၏အခြေခံမူတစ်ခုဘုံသစ္စာရှိမှုဖြစ်ပြီးအဆိုပါ "ချည်နှောင်ကြောင်းလည်စည်း" ။
ရှည်လျားသောအလုံအလောက်အပြည့်အဝစနစ်တကျဖြစ်လာမှတည်ရှိခဲ့သည့်တစ်ဦးချင်းစီပရိသတ်၌, အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်သူကိုအကွီးအကဲမြားသို့မဟုတ် presbyters တစ်ဗဟုရှိသေး၏။ ဤသူတို့သညျကျမ်းစာ၌ထြားအရည်အချင်းများ၏အခြေခံပေါ်တွင်ဒေသခံအသင်းတော် (1-3 1 တိမောသေ 8) ကရွေးချယ်ထားသည်။ အကွီးအကဲမြားအောကျတှငျအမှုဆောငျခွငျးထောကျမြား, ဆရာများနှင့်သာသနာပြုအရာ၌သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောညီမျှသို့မဟုတ်အကွီးအကဲမြားမှသာလွန်အခွင့်အာဏာမရှိကြပါဘူး။ အကွီးအကဲမြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစျမြိုးတညျးဟူသောဓမ္မသစ်ကျမ်း, အဆိုအရခရစ်တော်၏ဦးစီးမှုအောက်မှာအစေခံသောသူသည်အချင်းသိုးထိန်းသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်မှူးဖြစ်ကြသည်။ ဒေသခံဘုရားကျောင်း၏အကွီးအကဲမြားမှသာလွန်ခြင်းမရှိမွကွေီးအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။
ကမျြးစာကိုဖွင့်ပါစေသောခြောက်ဆယ်ခြောက်ယောက်စာအုပ်များ၏မူလကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ဘုရားသခင်ကသူတို့မှားယှငျးနိုငျနှင့်သော authoritative ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုရာအသုံးပြုပုံမှုတ်သွင်းခဲ့ကြယူဆနေကြသည်။ ကျမ်းစာလာသည်ကိုးကားစရာတိုင်းဘာသာရေးမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရာ၌ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာလာသည်အနေဖြင့်တစ်ဦးကကွညောခနောက်ဆုံးစကားလုံးစဉ်းစားသည်။ ကိုအသင်းတော်အပေါင်းတို့နှင့်ဟောပြောခြင်းများအတွက်အခြေခံ၏အခြေခံကျောင်းစာအုပ်သမ်မာကမျြးဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျဟရှောယ7အတွက်ကြေညာချက်: 14 ခရစ်တော်၏ကညာမွေးဖွားတဲ့အနာဂတ္တိအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထိုကဲ့သို့သောမဿဲ 1 အဖြစ် passages: 20, 25, သတို့သမီးကညာမွေးကြေညာချက်များအဖြစ်မကျြနှာကိုတနျဖိုးမှာကိုလက်ခံနေကြတယ်။ ခရစျတျောသညျမိမိလူတစ်စုံလင်သောဘုရားများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောယောကျ်ားဘဝအတွက်စုစည်းသည်တပါးတည်းသောဘုရားသခငျ၏သားတျောသညျအဖြစ်လက်ခံထားပါသည်။
သာသညျဘုရားသခငျထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မှဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားခံရဖို့မတရားသော predestines သောသဘော။ "ဘုရားသခပုဂ္ဂိုလ်များအဘယ်သူမျှမလေးစားမှု, သို့သော်ရှိသမျှသောလူမျိုးထဲတွင်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ပြုပြင်တတ်သောသူသည်အထံတော်သို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်အမှန်ဖြစ်သည်ဟု" တမန်တော်ပေတရု၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်, (တမန်တော် 10 ။ 34-35) တစ်ဦးအဖြစ်ယူတတ်၏ ဘုရားသခင့တစ်ဦးချင်းစီထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခံရဖို့ predestine, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတိုင်းမိမိကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ကြောင်းမပြုခဲ့ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။
အဆိုပါစကားလုံးဗတ်တိဇံ "ထိုးဖို့, ဗတ္တိဇံပေးရန်, ကျဆင်း။ ", ဂရိစကားလုံး "baptizo" မှကြွလာနှင့်စာသားဆိုလိုတယ် ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြိမ်အတွက်ဘုရားကျောင်းများ၏အလေ့အကျင့်ကြောင့်ဟူသောစကားလုံးများ၏ပကတိအဓိပ်ပာယျအပြင်, နှစ်မြှုပ်ခြင်းကျင့်သုံးနေပါတယ်။ ရောမ6အတွက်တမန်တော်ပေါလုကပေးတဲ့အဖြစ်နေဆဲနောက်ထပ်သာနှစ်မြှုပ်ခြင်းဗတ္တိဇံ၏ဖော်ပြချက်မှညီ: သူတစ်ဦးအလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်မည်ဟုနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကပြောသောဘယ်မှာ 3-5 ။
က "တာဝန်ခံ၏အသက်အရွယ်" ရောက်ရှိခဲ့ကြသူအမှတ်သာလျှင်သူတို့အားနှစ်လက်ခံနေကြတယ်။ ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ပေးတဲ့ဥပမာအမြဲတမ်းယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီသောသူတို့အားဟောပြောကြသည်နှင့်ကယုံကြည်သည်ပြီထောက်ပြနေပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအမြဲဗတ္တိဇံအရင်အဦးနေရာရမယ်, ဒါကြောင့်သာယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ရန်လုံလောက်သောဟောင်းသောသူတို့အားဗတ္တိဇံဘို့မထိုက်မတန်ဘာသာရပ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
အမှတ်ဝန်ကြီးများသို့မဟုတ်အသင်းတော်၏သာသနာပြုအရာ၌အဘယ်သူမျှမကအထူး prerogatives ရှိသည်။ သူတို့ကသိက္ခာသို့မဟုတ်အဘခမည်းတော်၏ခေါင်းစဉ်ကိုမဝတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်အသင်းတော်၏ရှိသမျှသည်အခြားသောလူဖြစ်ကြ၏အဖြစ်ဟူသောဝေါဟာရကိုညီအစျကိုတို့ကရိုးရှင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ သူတို့ပေးသောအကြံကိုမအကူအညီနဲ့ရှာဖှသေူအကြံပေးအကွီးအကဲမြားနှငျ့အခွားသူနှင့်အတူ။